Zvemagariro Metrics mune yako WordPress Dashibhodi | Martech Zone
Zvemagariro Metrics mune yako WordPress Dashibhodhi
Zvemagariro Metrics Pro iri rakabhadharwa WordPress plugin iyo inoteedzera maTweets, anoda, mapini, + 1s uye zvimwe kurudyi kubva kune yako WordPress dashibhodhi!
Zvimiro zveSocial Metrics Pro
Teedzera Zvemasaini Zviratidzo Iwe Ane Hanya Newe - Dashibhodhi kuongorora zviri pakati pevanhu zviitiko zvinotungamira zvemagariro senge Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, StumbleUpon uye LinkedIn. Unosarudza manetiweki aunoda kuteedzera.
Mavara ekuratidza Kuzivikanwa Kwehukama - Social Metrics Pro mitambo Excel-senge mamiriro ekuomesa. Zvinyorwa zvine huwandu hwakawanda kwazvo hwezvikamu zvinoratidzira girini. Zvinyorwa zvine yakaderera magariro midhiya zviitiko zvinoratidza amber uye tsvuku. Dzorera zvitsvuku kune magedhi uye iwe uri munzira yako kuenda pasocial media kubudirira.
Widgets uye Extensions Vakagadzirira - Unogona kuwedzera mashandiro nekushandisa akavakirwa-mukati uye ekunze majeti. Ona zvimiro zvenguva pfupi pane yako WordPress dashibhodhi, Pinda padheshibhodhi kubva kuWordPress admin bar uye kunyange kuratidza yako zvemagariro mukurumbira zvemukati pane yako blog padivi kana chero kune yako saiti.
Ronga, Tsvaga, Sefa nzira yaunoda - Ronga yako data kuti uone kuti ndeapi machira ari kuita zvakanyanya pane ayo masocial network. Ita kiyi yekutsvaga kutsvaga zvinyorwa zvakanangana nezvimwe misoro. Sefa nemhando yepositi, chikamu, zuva rekutsikisa kana nevanyori veposvo.
Export kune Excel yekuwedzera Ongororo - Social Metrics Pro inoita kuti ubudise iyo yakasvinwa, yakarongedzwa dhata uye tsika mibvunzo kuExcel Iwe unozowana dhata mune tebhu-yakatemwa uye nekoma-akapatsanurwa mafomati mafaira. Iwe unogona kushandisa Excel kana chero spreadsheet processor yaunosarudza.
Auto-inogadziridza Inogoneka - Social Metrics Pro inotsigira 1-tinya auto-kugadzirisa mashandiro. Iwe unogona kugadzirisa yako Social Metrics Pro mune kamwe chete kubaya kuburikidza neWordPress Dzidzo peji, kana kuigadziridza pamurume kana uchida. Iwe unogona kusarudza sarudzo yekugamuchira email ziviso pese panoburitswa vhezheni itsva.
Kuzivisa: Yedu yakabatana link yeSocial Metrics Pro inosanganisirwa mune ino posvo.
Tags: magariro metric prosocial pluginWordpress pluginWordpress yemagariro plugin
Ndezvipi CMOs Zvinofanirwa Kuziva nezve Social Login
Jun 28, 2013 na8:50 AM
Tinotenda nekutsikisa chimwe chinyorwa chikuru kwatiri. Izvi zvakanakira chero tekinoroji inoenderana blog.